सावधान ! यी खानेकुरा खाली पेट खाँदै हुनुहुन्छ ? निम्तिन सक्छ अल्सर र क्यान्सरसम्मको रोग - GyanBigyan
4 months ago 449 Views
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार संसारभर पेटभर खान नपाउनेको संख्या धेरै नै छ । करोडौँ नागरिक कुपोषणका कारण मृत्युको मुखमा पर्ने गरेका छन् । तर खाना खान पाउने व्यक्तिमा पनि विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या निम्तिने गरेको छ । केहीलाई आवश्यकता भन्दा धेरै खानेकुराले असर गरेको छ।
हामी मध्ये केहीले कतिखेर के खाने ? भन्ने जानकारी नपाउँदा स्वास्थ्य समस्या झेल्ने गरेका छौँ । आज हामीले खाली पेटमा खान नहुँने खानेकुराका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ।
गोलभेंडा: गोलभेंडा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तर खाली पेटमा गोलभेंडा खादा त्यसले प्रतिकूल असर गर्छ । फेसमा चमक ल्याउन समेत यसको प्रयोग हुन्छ । खाली पेटमा गोलभेंडा खाँदा यसमा हुने अम्लले पेटमा रहेको ग्यास्ट्रोइंटस्टाइनल एसिडसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ । परिणामस्वरुप पेट दुख्ने, ग्यास्टिक हुने, पेट पोल्ने, बान्ता हुने, पत्थरीको संभावना बढ्नेजस्ता स्वास्थ्य समस्या निम्तिने गरेका छन्। त्यसैले चिकित्सकहरुले गोलभेंडा पनि खाली पेट खान नहुने बताएका छन्।
चिसो पेय पदार्थ: खाली पेटमा चिसो पेय पदार्थ पनि पिउनु हुँदैन । जस्तै कोल्ड कफी वा कोल्ड ड्रिन्क्स वा सफ्ट ड्रिन्क्स खाली पेटमा खानु हुँदैन। खाली पेट चिसो पेय पिउने व्यक्तिको पाचन क्रिया नै सुस्त हुन्छ । पेय पदार्थमा हुने कार्बोनेट एसिड पेटको एसिडसँग मिसिँदा गम्भीर समस्या निमित्न सक्छ । पेटमा ग्यास भरिने, वाकवाकी हुने, वान्ता हुने, असहज हुने लगायतका स्वास्थ्य समस्या निम्तिने गर्छन्।
औषधि: खाली पेटमा औषधि खाँदा होसीयार हुनुपर्छ । औषधिमा रहेको तत्व शरीरभित्र रहेका तत्त्वसँग सिधै मिलेर रासायनिक प्रतिक्रिया दिँदा ठूलै समस्या निम्तन सक्छ । त्यसैले धेरै प्रकारका औषधि खाना खाएपछि मात्र खानुपर्छ । चिकित्सकले एन्टासीडलगायतका सीमित औषधि मात्र खाली पेटमा खानका लागि सुझाब दिन्छन् । अन्य औषधि खाली पेट खाँदा रोग निको हुनुको सट्टामा झन्झन् स्वास्थ्य समस्या बढ्ने देखिन्छ । नयाँ स्वास्थ्य समस्या थपिने गरेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
केरा: खाली पेटमा केरा कहिल्यै खानु हुँदैन । केराले छिटो तौल बढाउन मद्दत गर्ने भएकोले दुब्लो पातलो मानिसहरु बिहानै केरा खाने गर्छन् । तर बिहानै केरा खानु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट राम्रो होइन् । केराले हाम्रो शरीरमा म्याग्निसियमको मात्रा दुई गुणा बढ्छ र शरीरमा रहेको क्याल्सियमसँग रासायनिक प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ। परिणामस्वरुप पेट फुल्ने, ढुस्स हुने, डकार आउने, अपच हुने तथा एसिडीटि बढ्ने जस्ता समस्या देखिने हुन्छ । त्यसैले खाली पेटमा केरा खानु हुँदैन।
सखरखण्ड: सखरखण्डमा प्रशस्त प्रोटिन हुन्छ । खाली पेटमा यसको सेवन राम्रो हुँदैन । सखरखण्डमा अधिक मात्रामा हुने प्रोटिनले ग्यास्ट्रिकको समस्या बढ्छ ।परिणामस्वरुप पेट पोल्ने, पेट दुख्ने, जलन र पेट फुल्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले सखरखण्ड बिहानै खाली पेटमा नखानु राम्रो हुने विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ।
अमिलो फल: खाली पेटमा अमिलो जन्य फल पनि खानु हुँदैन । खाली पेटमा अमिलो फल खाने गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्छ। सुन्तला, कागती, अम्बा, अचार, लप्सीलगायतका फल खाली पेट खानु हुँदैन । अंगुर, आँप तथा अमिलोयुक्त फलफूलले पेटमा एसिड बढाउने काम गर्छ । त्यसैले चिकित्सकहरुले यस्ता फलहरु खाना पछि मात्र खान सुझाव दिएका छन्।
Don't Miss it सुत्नुभन्दा अगाडि यसरी उमालेर खानुहोस् केरा, केहि दिनमै देखिनेछ यस्तो चमत्कार
Up Next यस कारण हुन्छ युरिक एसिड, यस्ता छन् बच्ने उपाय
यस्ता संकेत देखिए रहनुहोस् सावधान ! हुनसक्छ मुखको क्यान्सर
मुखको क्यान्सर भनेको मुखका अंग, तन्तुको कोषको अस्वाभाविक र अनियन्त्रित वृद्धि हो। हटाउँदा पनि कुनै कोषको आकार प्रकारमा वृद्धि भइरह्यो…
4 months ago 633 Views
बेला-बेलामा पेट बाउडिन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो समस्या
पेटमा ग्यास भरिने, कब्जियत हुने, पखला लाग्ने जस्ता समस्यालाई हामी सामान्य ठान्छौ। कतिपय अवस्थामा यी सामान्य पनि हुन्। खानपान र…
4 months ago 450 Views
बाथ रोगले आत्तिएका व्यक्तिले छुँदै नछुनुहोस् यस्ता खानेकुरा, नत्र जोर्नीको दुखाईलाई झन् बढाउँछ
बाथ दुःखाईसँग सम्बन्धित रोग हो । सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई जुनसुकै समयमा पनि बाथ हुनसक्ने भए पनि जाडोको समयमा यसको…
4 months ago 2755 Views
शरीरमा भिटामीन डी को कमी भयो ? देखिन्छन् यस्ता लक्षण !
मानव शरीरलाई भिटामिन डीले धेरै फाइदा गर्छ तर, कतिपयमा यो भिटामिन अपुगका कारण विभिन्न समस्य हुने गरेको छ । अध्ययनहरूले पनि…
4 months ago 2355 Views
कतै तपाईको पाचन प्रणाली कमजोर त छैन ? यी लक्षणबाट थाहा पाउनुहोस्
शरीरको गन्ध-जब हाम्रो पाचन यन्त्र खराब हुन्छ वा खाएको पच्दैन तब शरीरमा विषाक्त पदार्थ जम्मा हुन्छ। यस्तो कुरा कसरी पनि…
4 months ago 2134 Views
तपाईका लागि मात्रै
यस्ता संकेत देखिएभने सोच्नुहोस् कलेजो खराबी हुँदैछ, यी लक्षणलाई गर्दै नगर्नुहोस् वेवास्ता
कतिपय व्यक्तिको कलेजोले सही ढंगले काम गरिरहेको हुँदैन। यद्यपि यसबारे उक्त व्यक्ति बेखबर हुन्छ । जब समस्या चर्को बन्छ तब…
4 months ago 2657 Views
हामीले खासै वास्ता नगर्ने बियाँका छन् धेरै फाइदा !
फर्सीका बियाँ, आलस, भाङ, सूर्यमुखी फूलका बियाँ, तिल आदि हामीकहाँ प्रशस्तै पाइन्छन् तर यसमा रहेको पौष्टिकताबारे कतिलाई थाहा छ ?…
9 months ago 637 Views
धेरै मानिसलाई अपचको समस्या हुन्छ। कहिलेकाहीँ धेरै उपाय गर्दा पनि अपचको समस्या दूर हुँदैन। कहिलेकाहीँ संक्रमणले त कहिलेकाहीँ हाम्रै जिवनशैली…
10 months ago 455 Views
निद्रा लाग्दैन ? यी ५ काम गर्नुहोस् जसले तपाईलाई मिठो निद्रामा पुर्याउनेछ
राति ओछ्यानमा पल्टियो, तर निद्रा नै पर्दैन । धेरैले यस्तो समस्या भोग्ने गरेका छन् । आाखा चिम्लिएर निदाउन खोजे पनि…
10 months ago 247 Views
क’हिल्यै नसुत्नुहो’स् यी ४ पोजीसनमा, हु’नसक्छ पे’टका लागि ख’तरा
यो त त’पाई सबैलाई थाहा नै होला, हामी ४ पो’जीसनमा सुत्ने गर्छौ । जुन हो एउटा दायाँ तर्फ, बायाँ तर्फ,सिँधा…
1 year ago 501 Views
एजेन्सी । स्मरण शक्ति बढाउन देखि मिर्गौलाको पत्थरी सम्म हटाउन यसरि मद्दत गर्छ हरीयो पालुंगो ! पालुंगोको साग स्वादका लागि…
9 months ago 618 Views
ज्ञानविज्ञानको वेबसाइटमा आउँनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद । हाम्रो लेखहरु तपाईलाई कतिको उपयोगी लागे ? यदि उपयोगी लागेमा कृपया सेयर गर्नुहोला । धन्यवाद ।
© Copyright 2020 GyanBigyan .